कोरोनालाई जित्न दुई तत्व भएका कुरा सेवन गर्न डा. एन्थोनी फाउसीको सल्लाह – Koshidaily
कोरोनालाई जित्न दुई तत्व भएका कुरा सेवन गर्न डा. एन्थोनी फाउसीको सल्लाह
access_alarms Koshi daily ३० भाद्र २०७७, मंगलवार ०९:३२	chat_bubble_outline 0	Comments
काठमाडौं। अमेरिकाका शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. एन्थोनी फाउसीले कोरोना भाइरस संक्रमणविरुद्ध शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता विकास गर्नको लागि दुई भिटामिन भएका खानेकुराहरु सेवन गर्न सल्लाह दिएका छन् । डा. फाउसीले कोरोनाभाइरसविरुद्ध इम्युनिटी विकास गर्न भिटामिन डी र भिटामिन सी सप्लिमेन्ट लिन सल्लाह दिए । अमेरिकी अभिनेत्री जेनिफर गार्नरसँग इन्स्टाग्राममा एक अन्तरवार्तामा डा. फाउसीले यस्तो बताएका हुन् ।
डा. फाउसीले भने ‘यदि तपाइँमा भिटामिन डीको कमी छ भने तपाइँमा संक्रमणको खतरा बढ्छ । म मानिसहरुलाई भिटामिन डीको सप्लिमेन्ट लिने सल्लाह दिन्छु किनकि म स्वयं पनि यो लिन्छु ।’ डा फाउसीे भिटामिन सीको सप्लिमेन्ट पनि लिन सल्लाह दिएका छन् । फाउसीले भने ‘मानिसहरु भिटामिन सी पनि लिन्छन् किनकि यो राम्रो एन्टिअक्सिडेन्ट हो । त्यसैले यदि मानिसहरु भिटामिन सी सप्लिमेन्ट लिन चाहन्छन् भने पनि कुनै फरक पर्दैन ।’
के पालक, एल्डरबेरी वा कुनै अन्य सप्लिमेन्टले प्रतिरोधी क्षमतालाई बलियो बनाउने काम गर्छ ? भन्ने प्रश्नमा डाक्टर फाउसीले भने ‘धेरै मानिसहरु यो सुनेर निराश हुन सक्छन् तर यसको जवाफ हो – हुँदैन । जोन हप्किन्स सेन्टर फर हेल्थ सेक्युरिटीका बरिष्ठ स्कलर अमेश ए अदलजाले भने ‘यो कुराको स्पष्ट प्रमाण छ कि भिटामिन डीले श्वास प्रश्वाससम्बन्धी संक्रमणसँग लड्न सहयोग गर्छ ।’